Uzikhuphela Njani Iibhrashi Zokuvelisa: IiWebhusayithi zokukhuphela iibhrashi | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | | ngokubanzi, Tutorials
Kubalulekile ukuba uyazi ukuba ukuba usebenza kwihlabathi lemizobo okanye uyilo lwegraphic, uya kuba nomdla wokwazi ukuba zininzi iindlela zokukhuphela iibrashi zoyilo kunye nezantlandlolo ezinokwenza iiprojekthi zakho zibe zobugcisa ngakumbi.
Kungenxa yesi sizathu ukuba kule post, Siza kuchaza indlela yokukhuphela kwaye ngaphezu kwayo yonke into apho yenzelwa khona. Maninzi amaphepha ewebhu apho unokuzikhuphela khona, iisayithi zeprimiyamu ezineendleko ezongezelelweyo okanye iisayithi ezisimahla apho unokonwabela izibonelelo ezinikezelayo.
Ukuba ungumthandi wayo yonke into esiyikhankanyileyo apha ngasentla, zilungiselele le adventure yobugcisa intsha iseza.
1 Yintoni iProcreate?
2 Ukhuphela kwaye ufake njani iProcreate brushes
2.1 1 nyathelo
2.2 2 nyathelo
3 Apho uzikhuphela khona iibrashi
3.3 Uyilo lokusika
4 iintlobo zeebrashi
4.1 iibrashi ezipheleleyo
4.2 iibrashi ezinamachokoza
4.3 iibrashi zecalligraphic
4.4 iibrashi zokuthungwa
4.5 iibrashi ezihlekisayo
Qalisa sisixhobo esiyinxalenye kwaye sisebenza njengesoftware yomzekeliso. Ngokungafaniyo noMzobi. I-Procreate inezixhobo eziphambili ezahlukeneyo ezivela kwiikhosi ze-intanethi ukuya kwiibrashi ezingapheliyo ezivumela ukusetyenziswa okukhulu kunye nokusetyenziswa komzobo.
Ukongeza, iyafumaneka kuzo zombini i-iPad. Ngaphandle kokuba sisicelo esihlawulwayo, ikuvumela ukuba wenze ii-vectors ezinokwenzeka kunye nezinto zegraphic. Iindleko zenyanga zihluka ukusuka kwi-9 ukuya kwi-€ 0, njengoko ubona ukuba lixabiso elingekho kakhulu okanye elibi kakhulu.
Enye yeempawu ezenza ngokungathandabuzekiyo i-Procreate enye yezixhobo zeenkwenkwezi zemizobo luluhlu lwayo olukhulu lweebrashi ezinikezelayo. Ayibonakali nje ngeebrashi zayo kodwa nangezixhobo zayo ezahlukeneyo ezisinceda siguqule zonke iintshukumo esizenzayo xa sisebenzisa isicelo njengoko sithanda.
NjengePhotoshop, iProcreate iphinda isebenze ngeemaleko, ezivumela ukuba amandla okusebenza afane kwaye akukho mahluko mkhulu ukuba usebenzisa iPhotoshop emsebenzini wakho.
Ngenye yezona zixhobo ezilula ukuqondisa, ngoko inqanaba layo lobuchule aliphezulu kakhulu kwaye kunokwenzeka ukwenza imifanekiso zombini kwipensile kunye nemouse.
Ukhuphela kwaye ufake njani iProcreate brushes
Umthombo: Andro Hall
Okulandelayo siza kuchaza indlela yokukhuphela kunye nokufaka iibrashi. Ekuphela kwento oya kuyidinga kukuba ube nesi sixhobo silandelayo: Iipensile ezimangalisayo zeProcreate (iibrashi). Nje ukuba uyikhangele kwi-browser yakho ye-intanethi kwaye uyikhuphele kwaye uyifakile, uya kuba ukulungele ukuqalisa.
Ukukhuphela iibrashi uya kufuna:
Into yokuqala esiza kuyenza ukuvula iseyile entsha kwaye ngale ndlela bamba i icon yebrashi ukuvula indawo yolawulo yeebrashi. Siza kukhetha ifolda apho ufuna ukufaka khona ibrashi. Unokwenza incwadi entsha ngokucofa i + iqhosha phezulu ekhohlo kuluhlu lweseti yebrashi. Cofa i + iqhosha elingentla koluhlu lweebrashi ukungenisa ibrashi entsha.
Nje ukuba senze isiqulathi seefayili siya kuchukumisa iqhosha lokungenisa kwikona ephezulu ngasekunene.
Ifestile yeefayile zesixhobo sakho iya kuvula ke. Iifayile zinokungeniswa ngaphandle kwiifolda kwiDrive, iCloud Drive, okanye kwiDropbox yakho. Cofa nje kwibrashi ofuna ukuyingenisa kwaye iya kongezwa ngokuzenzekelayo kwifolda oyikhethileyo ngaphakathi kokwenza iibrashi zakho.
Ukukhulula iibrashi ezingaphakathi kweefayile ze-ZIP unokukhuphela usetyenziso lwasimahla olubizwa ngokuba yiFayileExplorer okanye uMphathi weFayile. Nje ukuba isicelo sifakelwe, iwindow iya kuvula unzip kwaye ungenise kwifestile yefayile ye-iPad yakho.
Ukuba unayo ikhompyuter ye-MAC, Ungayivula ifayile yebrashi yakho kwaye uyitsale kwiAirDrop window. I-iPad yakho kufuneka ibonakale ivuliwe ukuze ufumane iibrashi. Ukutsalela kwigama le-iPad yakho kuya kungenisa iibhrashi kwi-Procreate.
Apho uzikhuphela khona iibrashi
Envato Luhlobo lwentengiso ye-intanethi ephawulwa ngokuqulatha inani elikhulu lamanqaku njengale: ii-mockups, izinto zentengiso ye-intanethi kunye ne-offline kunye nemidiya, njl. Ngoku sesinye sezona zicelo zisetyenziswa kakhulu kuba inokhuphelo lwemihla ngemihla olungaphezulu kwezigidi ezi-4.
I-Gumroad yenye yeendawo zentengiso ezikwi-intanethi kwabo basenza umxholo wedijithali. Esi sixhobo esidumileyo Iye yaba yintsholongwane enkosi kakhulu kwimenyu yayo elula kwaye kulula ukuyijonga kunye neentlobo ngeentlobo zeemveliso ezinika abasebenzisi bayo.
Ukusikwa koyilo kwaziwa kwihlabathi jikelele ngokuba sisicelo esinemveliso eyenziwe ngesandla ngamagcisa ahlukeneyo kunye nabayili. Sesinye sezixhobo ezikuvumela ukuba ukwandise intsimi yobugcisa bomzobo kunye noopopayi. Ukongeza, unokufumana iibrashi ezifumanekayo kwiPhotoshop.
Iibhrashi ezipheleleyo zifumana amagama azo kwiintlobo ngeentlobo zezenzo ezikwaziyo ukuzenza. Phakathi kwazo kukuzoba.
Iibhrashi eziqinile zidla ngokuba ziibhrashi ezinencam yazo ebonakala kakhulu kwaye ifanelekile ukuqinisekisa ukuba umzobo ulula kakhulu kwaye kulula ukuwuphatha.
Iibrashi ze-calligraphic zenzelwe ngenjongo yokusetyenziswa kwiiprojekthi i-typography yazo ibe yi-protagonist. Kule meko, zenzelwe kuphela abakhupheli okanye ababhali.
Iibrashi zokuthungwa ziza ngokugqityezelwa yimathiriyeli enje nge-watercolors, ipensile, i-sandpaper okanye uninzi lwazo zimiselwa yingxolo ezibonakalisayo.
Ngolunye uluhlu lweepensile olufikelela kwi-12 ezahlukeneyo kunye neebhrashi eziluncedo kakhulu. Ukuba into oyifunayo kukudala iifonti ezintle kunye nezobuchule, ungalibazisi ukusebenzisa olu hlobo lwepensile.
Iibhrashi ezihlekisayo zidla ngokuba zezona iibhrashi zoqobo njengoko zikholisa ukuzoba kwaye zenze imizobo efana ne-retro ehlekisayo ngokuchukumisa okuncinci ukusuka kwixesha.
Ngokwesiqhelo, ziqulathe iibhrashi ezili-12 ezidla ngokulungele i-iPad kwaye zikwakhatshwa yimizobo eyahlukeneyo egcina iimpawu ezibonelelwe ngaphambili.
Ukuba usithandile esi savenge sitsha kwiProcreate kunye neebrashi zayo, sicebisa ukuba ufunde nezinye ezininzi esikwenzele zona.
Njengoko ubonile, zininzi iibrashi ezifumaneka kwi-intanethi. Ungazama ukufaka ezinye zeepakethe esizikhankanye ngaphambili kwaye uqale ukuzoba ngazo.
Ngoku lithuba lakho lokuba ube ngumlingisi ophambili kwimizobo yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukhuphela njani ukuvelisa iibhrashi
Izixhobo zokuqaphela i-typography